Jabuuti oo maanta ka bilaabanaysa Ololaha doorashada dalkaasi. | Dalka Times - News and Politics
Home SO WARKA Jabuuti oo maanta ka bilaabanaysa Ololaha doorashada dalkaasi.
Jabuuti oo maanta ka bilaabanaysa Ololaha doorashada dalkaasi.
Waxaa maanta magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti ka bilaabanaysa ololaha doorashada dalkaaasi, waxaana markii shanaad u sharaxan qabashada xilka madaxtaxnimo ee dalkaasi Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle
Laakiin waxaa ilaa hadda isasoo taagay hal siyaasi oo tartanka ku wajihi doona.
Zakariye Ismaaciil Faarax ayaa sheegay in uu loollan galin doono madaxweynaha muddada dheer xukunka hayay, wuxuuna sheegay in uusan ka cabsaneynin ku shubasho, rajadiisuna ay ku xiran tahay oo kaliya go’aanka shacabka.
Hoggaamiyayaasha xisbiyada mucaaradka ayaa qaadacay ka qeybgalka doorashada April oo ay ku tilmaameen riwaayad.
Ma jiro guddi madax bannaan oo maamula doorashooyinka Jabuuti, waxaana howlaha doorashooyinka dusha kala socda wasaaradda arrimaha gudaha.
Mucaaradka ayaa ku eedeyay madaxweyne Geelle inuu is hortaagay meel marinta heshiis ay mucaaradka iyo dowladda 2014-kii isku afgarteen in la sameeyo guddi madax bannaan oo howshiisu tahay diyaarinta doorashooyinka.
Muddo 22 sano ah ayuu Ismaaciil Cumar Geelle soo ahaa madaxweynaha Jabuuti, haddana wuxuu u raadinayaa inuu xafiiska sii joogo shan sano oo kale.
Abdi Malik 3 weeks ago
Faaqidaada Jimcaha ee Danjire Caalim: Xaalada cakiran ee magaalada Muqdisho
Kenya oo ku hanjabtay iney Soomaalida dalkeeda ku nool talaabo cad ka qaadi doonto.
Beesha Caalamka oo ka xumaatay hab dhaqanka Madaxweyne Farmaajo (Warbixino Sir ah).
Hey’adda IMF oo ansixisay lacago qeyb ka ah deyn cafinta Soomaaliya.
RW Itoobiya Abiy Axmed oo ogolaaday in Ciidamada Eritrea laga saaro gobolka Tigrey.
Somalia Constitutional input consultation for the disabled people rights held in...
Somalia disability network meeting
Somalia Disabled People Produced local made face mask